कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि मेरो बाबा जेल बस्नुपर्ने ? - inaruwaonline.com
कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि मेरो बाबा जेल बस्नुपर्ने ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०९, २०७४ समय: ७:५९:३३
काठमाडौं, ९ चैत । ‘आज पनि सोध्न मन लाग्छ, बालकृष्ण ढुंगेल जेल बस्नुपर्ने तर अरू छाती चौडा गरेर घुम्ने, यो कस्तो गणतन्त्र हो ?’ उनको प्रश्न त्यतिमै रोकिएन, ‘देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ । गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर त्यही गणतन्त्रका लागि लडेका एउटा योद्धा जेलमा छन् । यो कस्तो गणतन्त्र हो ? कहाँ छ गणतन्त्र ?’
‘गाउँमा साथीहरूका बुबाले नयाँ कपडा ल्याइदिएको देखाउँदा पनि हामी घरमा आएर आमालाई बुबा खोइ भनेर सोध्थ्यौंै, यहाँसम्म कि बालकृष्ण ढुंगेलकै छोरी भएकाले हामीले बाबुको फोटो हेर्नसमेत पाएका थिएनौं,’ विनिताले भनिन्, ‘घरमा सेना र प्रहरीले खानतलासी गर्ने काम सधैंजस्तो गथ्र्यो । आमाले बुबाका फोटा घरपछाडि खाल्डो खनेर लुकाएकी थिइन् । एक दिन त्यो पनि सेनाले थाहा पाएर खाल्डो उधिनेर फोटो नै लग्यो, त्यसपछि फोटामा भेटेका बुबा पनि हामीबाट टाढा भए ।
बालकृष्ण ढुुंगेलका छोरी भएकै कारण हामीले आप्mनो बाबाको फोटो पनि हेर्न पाएनौं ।’ विनिताले सुरक्षाका कारण गाउँमा बस्न नसकेपछि काठमाडौंमा आएर आमा ज्यामी काम गर्न थालेको र आफूहरू अनाथालयमा बसेको समेत सुनाइन् ।उनले मानवअधिकारवादीलाई आफ्नो मानवअधिकारबारे खोज्न नपर्ने भनेर प्रश्नसमेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘सावित्री श्रेष्ठको मानवअधिकार खोज्ने मानवअधिकारवादीहरूले मेरो मानवअधिकार किन खोज्दैनन् ?’ के मेरो मानवअधिकार हुँदैन ? हुन्छ भने किन खोज्दैनन् ?’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि व्याकुल माइला, पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्कीलगायतले ढुंगेलको योगदान र उनले रचेका गीतहरूको प्रशंसा गरेका थिए । चेतन सापकोटाद्वारा संगीतबद्ध गरिएका गीति संग्रहमा अञ्जु पन्त, शिव परियारलगायतको स्वर रहेको छ । गीति एल्बममा गाउँघरका दुःखसुखदेखि माया, प्रेम तथा जीवन–मरणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।